N'ikpeazụ, i ka elu ka uche gị kwụsịrị ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, ma na-rapaara ahọpụta a ziri ezi onye si nza nke Android mgbọrọgwụ ngwaọrụ? Ị na-adịghị na ya. Isiokwu a mbak na mma ị 5 Android mgbọrọgwụ software na mma 3 Android mgbọrọgwụ ngwa.
Part 1. Best 5 Android dịrị Software ka Nkpọrọgwụ Android na Computer
Part 2. Best 3 Nkpọrọgwụ ngwa ọdịnala n'ihi Android ka Nkpọrọgwụ Android enweghị Computer
Na akụkụ a, m nwere ike ikwu kasị mma 5 mgbọrọgwụ software maka gam akporo, nke na-enyere ndisio ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba site na kọmputa mfe na conveniently.
Wondershare MobileGo bụ otu nke kasị mma mgbọrọgwụ software maka Android ị hụtụworo. Ọ bụ ihe dị mfe na-eji ihe ngwọta maka dịrị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na 1 Pịa. E wezụga, ọ bụ dakọtara na oke Android ntị na mbadamba emepụta site Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, Huawei, Acer, Google na ndị ọzọ.
100% mma na nwetara, ọ dịghị ize ndụ.
Adịghị ndum akwụkwọ ikike.
Nkwado n'elu 3, 000 Android igwe na mbadamba.
Ndabere / weghachi ibubata data tupu / mgbe dịrị.
Jikwaa gbanyere mkpọrọgwụ Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na otu ebe.
Ọ bụghị na-enye unroot ọrụ n'ihi na oge ịbụ.
Kingo bụ ihe ọzọ na free software maka Android rooting. Dị ka Wondershare MobileGo, ọ na-enyere gị aka kwụsịrị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na 1 Pịa. Ọ na-akwado Android 2.3 ruo Android 4.2.2, na-arụ ọrụ nke ọma na HTC, Samsung, Sony, Motorola, Lenovo, LG, Acer, na na.
Ofụri Esịt dakọtara na Android 2.3 ruo Android 4.2.2.
Kwado wepụ mgbọrọgwụ n'oge ọ bụla.
Nchekwa na n'ihe ize ndụ-free.
Adịghị akwado Android 4.4 ma ọ bụ ruo.
SRSRoot bụ obere dịrị software maka Android. Na ya, i nwere ike kwụsịrị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, nakwa dị ka wepụ mgbọrọgwụ ohere na otu click. Ọ bụ n'efu na-enye gị ụzọ abụọ ka mgbọrọgwụ. Otu bụ Nkpọrọgwụ Device (All Ụzọ) Nke ọzọ bụ Nkpọrọgwụ Device (SmartRoot).
Arụ ọrụ nke ọma na Android 1.5 ruo Android 4.2.
4. Nkpọrọgwụ Genius
Dị ka aha ya na-egosi, Nkpọrọgwụ Genius bụ a smart Android mgbọrọgwụ software kere China. Ọ na-eme Android dịrị mfe, mfe na ngwa ngwa.
Na-akwado ihe karịrị 10,000 Android igwe.
Otu Pịa mgbọrọgwụ, mfe ihe dị mfe.
Kwado Flash omenala ROM, na-ewepụ wuru na--ngwa mgbe dịrị.
Dakọtara na Android si 2.2 ka 4.4.
Ọ bụghị na-enye unroot ọrụ n'ihi na oge ịbụ
Dị nnọọ ka Nkpọrọgwụ Genius, iRoot bụ ihe ọzọ dị ike mgbọrọgwụ software kere site Chinese ndị mmadụ. Nanị otu click, na i nwere ike ịbụ nna ukwu nke gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Na-akwado ọtụtụ puku Android igwe.
High ọma ọnụego nke rooting.
-Arụ ọrụ maka 3000+ gam akporo ngwaọrụ, gụnyere Samsung, HTC, LG, Motorola, wdg
N'ihi na nke mbụ supers
SuperSU Pro: SuperSU (anọchi ibu ibu ọrụ) bụ a mgbọrọgwụ ohere ngwa n'ihi na Android, nke nwere ike inyere aka ma ọ bụ ịgọnahụ ohere mgbọrọgwụ mgbe ọ bụla ọ bụla ngwa choo mgbọrọgwụ ohere. Ọ ga-dee gị oke na-ekwe ka ndị ngwa iji nweta mgbọrọgwụ enweghị apostle. Ọ na-eme ka a log nke mgbọrọgwụ accesses.
Mgbọrọgwụ ohere apostle, na-egbu osisi, na Ịma Ọkwa.
Nwa oge unroot ọ bụ kpam kpam unroot ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Na-arụ ọrụ ọbụna mgbe Android na-adịghị ekwesị booted.
Eteta on ozugbo.
Na-arụ ọrụ dị ka usoro ngwa.
Accesses ya site ịkpọ oku * # * # 1234 # * # * ma ọ bụ * # * # 7873778 # * # * si dialer ọbụna na ọ na-ezo si obubata.
4- Selectable gburugburu Ọchịchịrị, Ìhè, Light- Ọchịchịrị Actionbar, na Ndi an-kpọ ngwaọrụ.
5- Selectable oyiyi maka ngwa.
Ezigbo ngwa, adịghị mmezi ibu na CPU.
Ọ dịghị advertisement.
Nwere ike ịbụ na-ezo.
Obere na size, dị nnọọ 2.2MB ohere.
Ị nwere ike ghara mgbachi na ngwa na a pin, ma nke a mma a na-kwukwara na Pro version nke bụ a na-akwụ ụgwọ mbipute a ngwa.
Download SuperSU Pro si Google Play Store >>
A na ngwa na-eme fọrọ nke nta ahụ dị ka SuperSU. Na a na ngwa ị na-aga na-PIN nchebe maka na ego, nke dị mgbe akwụ ụgwọ maka ya na SuperSU.
A na ngwa bụ obere arọ tụnyere SuperSU, mgbe ọ na-abịa CPU-eji. The interface bụghị na ezi mgbe beta version na oru, ma ukara version dị mma ma na-agba were were. The Mmepụta nke a na ngwa ka a mara ọkwa na a ngwa ga-enwe mgbe nile free na ọ dịghị ụgwọ mbipute ga-oru ebi.
Ọ na-enye multi onye ọrụ na-akwado (android 4.2 n'ihu).
Ọ bụ a kpam kpam oghe isi oru ngo; i nwere ike ịhụ ndị isi koodu na github.
PIN nchebe. Ọ jụrụ n'ihi na PIN Mgbe ọ bụla encounters a mgbọrọgwụ ohere arịrịọ.
Ọ bụla ngwa nwere ike ahazi iche iche.
Mgbọrọgwụ ohere apostle, na-egbu osisi, na ngosi atụmatụ.
Ọ nwere ike ijikwa multiple mgbọrọgwụ ohere arịrịọ na a n'otu oge.
Mmelite nnọọ ugboro ugboro na n'ọma ahịa, n'ihi ya ị ga-agbakwu akwado ndị niile na ọhụrụ Android nsụgharị fọrọ nke nta ozugbo.
Ị nwere ike ịtọ oge nke arịrịọ tupu ha oge.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a free ngwa, mgbe ahụ, i nwere ike ịhụ ihe ọ bụla na-eji ngwa mma karịa onye a. Ị ga-eche na ị na-eme a ikwere site na-aga n'ihi a ụgwọ ngwa.
Ọ dịghị nche voids na a ngwa, ihe niile bụ ihe uzo.
A na ngwa bụ obere bit arọ na okwu nke CPU ojiji
The interface nwere ike mee ka mma, ma nke a nwere ike ịbụ nke onye mmasị. Ọ bụrụ na m na-adịghị amasị interface apụtaghị na ị ga na-eche otu ihe ahụ.
Download Superuser si Google Play Store >>
Ọ bụ ihe na Android mgbọrọgwụ ngwa e n'ihi na ahụmahụ ndị mmadụ ma ọ bụ mmepe, Newbies ma ọ bụ na-enwechaghị ahụmahụ na-gwara-anọ n'ebe a na ngwa. A na ngwa kwe niile ngwa iji nweta mgbọrọgwụ Ozugbo ọnụọgụ abụọ faịlụ Nwela arụnyere, ị nwekwara ike wepụ a ngwa mgbe na. N'ihi ya, ị ga-inwe ihe ọ bụla pop gbasie arịọ maka ikike iji nweta mgbọrọgwụ, ndị pop gbasie nwere ike iwe gị ma ọ bụrụ na i jiri ọtụtụ gbanyere mkpọrọgwụ ngwa. Iji a ngwa ị nwere ike ịnọ n'ebe na iyatesịt.
Ị ga-na-mgbọrọgwụ ohere ọbụna ma ọ bụrụ nke a na ngwa na-uninstalled ma ọ bụ ego n'anya emerụ Ozugbo ọnụọgụ abụọ faịlụ Nwela arụnyere.
I nwekwara ike iwepụ na ngwa mgbe wụnye ọnụọgụ abụọ faịlụ. N'ihi ya, i nwere ike ịzọpụta ebe nchekwa ohere.
Na-enye mgbọrọgwụ ohere ọ bụla ngwa na-enweghị apostle maka ikike nke nwere ike ịzọpụta gị oge, ebe nchekwa na CPU.
The ngwa e mere maka mmepe na ahụmahụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-eche nchebe site n'inye ndị mgbọrọgwụ ohere site apostle maka ya, mgbe ahụ ngwa bụ abụghị nke gị.
Ọ bụrụ na ị na-a àgwà nke na nbudata na wụnye random gbanye mgbọrọgwụ ngwa ọdịnala si weebụ, mgbe ahụ, na-eji ngwa bụ abụghị nke gị. Ị pụrụ brick ekwentị gị na ikpe.
Free mbipute a ngwa-egosi na ụfọdụ mgbasa ozi, ka tufuo na, ị kwesịrị ị na-azụ ihe na-akwụ ụgwọ version.
A na ngwa bụ ugbu a dị maka ndị Android ngwaọrụ nke na-agba na ogwe aka processor.
The ngwa dabeere na iwu akara interface. Onyeōzi ọrụ interface na-adịghị nyere.
Download Superuser X [L] si Google Play Store >>
Ụwa # 1 ngwa ngwa, dị mfe na mfe na-eji faịlụ mgbake software maka Android ngwaọrụ
Ọzọ Isiokwu banyere Android dịrị
Nzọụkwụ na Nkpọrọgwụ Samsung Galaxy S4
Naghachi ehichapụ faịlụ site Android
Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si gam akporo
Naghachi ehichapụ SMS si gam akporo
Top 12 Mere Iji mgbọrọgwụ Android Devices